ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသရုပ်မှန်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထီးကျန်သောဆယ်ကျော်သက်များအကြားပြSexနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသူအဖြစ် (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်
Autori: Landripet, အိုင်ဗင်
Naslov ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအကြားပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းမှတစ်ဦးအာမခံအဖြစ်ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း
Izvornik AbstractsRome, အီတလီ၏ Sexology စာအုပ်၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ် 13th ကွန်ဂရက်: Sexology, 2016 ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ်။ ။
Dio CC ကိုčasopisa: NE
စကိတ် Sexology ၏ဥရောပအဖွဲ့ချုပ် 13th ကွန်ဂရက်
ကိုယ့် datum Mjesto: Dubrovnik, Hrvatska, 25. -28 ။ svibnja 2016 ။
Ključneriječi: ရိပ်မိညစ်ညမ်းသရုပ်မှန်; ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်; အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်; sexting; မြီးကောင်ပေါက်
Sažetak- Objective ။ အထီးမြီးကောင်ပေါက်အကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားမှုနှုန်းစာပေအစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင့်စစ်မှန်သောဘဝအတွေ့အကြုံများတဲ့မရှိခြင်း, ညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့လိင်အကြောင်းကိုလက်တွေ့စိတ်ကူးများနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့် sexting အကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်ရိပ်မိညစ်ညမ်းသရုပ်မှန်၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍစူးစမ်း။
ဒီဇိုင်းနှင့် METHOD ။ ဘာဝနာမော်ဒယ်များဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်း (ပေမဲ့အသက်အရွယ် = 928) ကိုဖော်ထုတ်အစီရင်ခံတင်ပြသူကို Zagreb ထံမှ 16.1 အထက်တန်းကျောင်းအထီး sophomores ခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတိတ်ခြောက်လအတွင်းနှစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းဖြင့်တိုင်းတာနှင့်နှစ်ပတ်အတွင်း (α = .79) ခံခဲ့ရသည်။ ခိုင်လုံသော 4-item ကိုအကြေးခွံရိပ်မိညစ်ညမ်းသရုပ်မှန် (α = .86) နှင့် sexting (α = .74) အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် (≤14) နှင့်လိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူမှ proclivity တစ်ခုတည်းပစ္စည်းများနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်။ အပြာစာပေအသုံးပြုမှုသည် sexting (β = .29; p <.01) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု (β = .11; p <.01) နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အရိပ်လက္ခဏာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (β = .22; p <.01), အလှည့်၌ sexting (β = .12; p <.01) နှင့်ရန်လိုသောအပြုအမူများ (β = .10; p <.01)။ သေးငယ်တဲ့ဆိုသော်ငြားသွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုရိပ်မိညစ်ညမ်းသရုပ်မှန် (ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) စိတ်အခန်းကဏ္ဍညွှန်း, ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရှိကြ၏။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အစောပိုင်းပွဲဦးထွက်အကြားတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်လင့်များ၏အဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားများရှာတွေ့ခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတချို့ပြဿနာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ညွှန်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုဝေဖန်ဧည့်ခံဖွံ့ဖြိုးဆဲရည်ရွယ်ပညာပေးအစီအစဉ်များလိုအပ်ကြောင်းကိုထောက်ခံပါတယ်။
Vrsta Sudjelovanja: နံရံကပျကျွွောငာ
Vrsta prezentacije ဦး zborniku: Sažetak
ဖြစ်ရပ်မှန်များ- Međunarodna recenzija
Projekt / တေ: HRZZ-IP-2013-11-9221
Izvorni jezik- ENG
Znanstvena područja: Javno zdravstvo ဈ zdravstvena zaštita, Sociologija, Psihologija
Tiskani medij- da
URL ကအင်တာနက်ကို adrese: http://f1000research.com/posters/5-1055
Upisao ဦး Crosby: အိုင်ဗင် Landripet ([အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]), 16 ။ Srp ။ 2016 ။ ဦး 16: 13 sati